ဝိညာဉ်ရေးအနစ်နာခံခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာချီဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > ဝိညာဉ်ရေးရာယဇျပူဇျော
ဓမ္မဟောင်းအချိန်ကဟေဗြဲများသည်အရာရာတိုင်းအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသည့်အခါသမယများနှင့်အခြေအနေများသည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ခ။ မီးရှို့ရာယဇ်၊ ဘောဇဉ်ပူဇော်သက္ကာ၊ မိ peace ဟာယယဇ်၊ အပြစ်ဖြေရာယဇ်၊ သားကောင်တစ် ဦး စီတွင်အချို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်။ ပွဲတော်နေ့များ၊ လဆန်းနေ့များ၊ လပြည့်နေ့များစသည်တို့တွင်လည်းယဇ်ပူဇော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဘိဓာန်ကယဇ်ကို“ ဘုရားသခင်အားတန်ဖိုးရှိသည့်အရာတစ်ခုခုကမ်းလှမ်းသည့်အပြုအမူ” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်အဘယ်တန်ဖိုးရှိနိုင်သနည်း။ ငါတို့ထံမှသူဘာမှမလိုအပ်ဘူး သို့သော်သူသည်ကျိုးပဲ့သောစိတ်၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလိုချင်သည်။
၎င်းသည်ကြီးမားသောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများဟုမထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်လူ့ဇာတိနှင့်ဆိုင်သောသဘာဝအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ မာနသည်လူသားတို့၏သဘာဝအခြေအနေဖြစ်သည်။ ကျိုးပဲ့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းဟူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်မာနထောင်လွှားခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘုရားသခင်အားစကားပြောခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ စိတ်ဝိညာဉ်အားစိတ်တွင်ထင်ဟပ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ဖြုန်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်အခြားအရာများကိုစွန့်လွှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုဝေးကွာစေပြီးစကြဝuniverseာကြီး၏ဘုရားသခင်အပေါ်အာရုံစိုက်သည့်အခါချီးမွမ်းခြင်းခံရသည်။ နောက်တဖန်လူတစ် ဦး ၏သဘာဝအခြေအနေသည်မိမိကိုယ်ကိုသာစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင့်ပလ္လင်တော်သို့ဆောင်ယူလာသည်။
ရောမ ၁2,1 weist uns an, unseren Leib als lebendiges Opfer hinzugeben, heilig und Gott wohlgefällig, worin unser geistlicher Gottesdienst besteht. Statt unseren Leib dem Gott dieser Welt zu opfern, stellen wir uns Gott mit unserem Leib zu Verfügung und beten ihn in unseren täglichen Aktivitäten an. Es gibt keine Trennung zwischen der Zeit im Gottesdienst und der Zeit ausserhalb des Gottesdienstes – unser ganzes Leben wird zum Gottesdienst, wenn wir unseren Leib auf Gottes Altar legen.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံနေ့စဉ်ယဇ်ပူဇော်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကနှင့်အညီအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မာနထောင်လွှားခြင်း၊ အလိုတော်နှင့်လောကအရာများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒ၊ မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်နံပါတ်တစ်ဘဝအတွက်အသက်ရှင်ရန်အတ္တဆန်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံရသည်။
ယဇျပူဇျောမှုမြားကိုဤအရာမြားထကျ ပို၍ အဖိုးအခ၊